नव वर्षमा विकास– सत्य युग आगमनको शुभकामना | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / नव वर्षमा विकास– सत्य युग आगमनको शुभकामना
नव वर्षमा विकास– सत्य युग आगमनको शुभकामना
Posted by: युगबोध in विचार April 13, 2018	0 61 Views
आजबँट २०७४ साल सकिएर भो लिदे खि २०७५ साल प्रारम्भ हु“दै छ । हरे क दे शमा नव वर्षलार्ई पर्व वा उत्सवको रुपमा लिने विश्वव्यापी चलन छ । ने पालमा विक्रम सम्वतलाई सरकारी मान्यताका साथ चलन गरिएको छ । त्यसै ले बै शाख १ गते लाई नव वर्षारम्भको रुपमा मान्ने परम्परा छ । नव वर्षको अवसरमा सबै मा शान्ति, आरो ग्य, सुख र समृद्धि छाईरहो स् भने र सुन्दर, सार्थक र सुप्रिय शव्द चयन गरे र मान्यवर, मित्रजन र परिवारका सदस् यमा शुभकामना साटासाट गनेर् चलन छ । यस्ता अभ्यासले व्यक्ति तथा समाजमा हर्ष, उत्साह, र उमङ्ग भने ेर् भएबाट ने पाली समाजमा नया“ वर्षलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
नव वर्षको यस पावन अवसरमा यस ले खमार्फत सम्पूर्ण ने पाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आरो ग्य, सम्पन्नता, सुख, शान्ति, प्रगति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै सबै मा सिपालु हुन प्रे रणा मिलो स् । मे हनत गर्न जा“गर चलो स् । सहयो गी हुन मन लागो स् र इमानदार एवं अनुशासित भएर जिम्मे वारीमा जुट्ने ऊर्जा प्राप्त भइरहो स् भन्ने सदिच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु  । हरे क मानिसमा उसभित्र अथाह शक्ति र संभावनाको े भाव लुके को हुन्छ । विशे ष तरीका वा उपायबाट उक्त भावलाई जागृत गराउन सकिन्छ । नया“ वर्षलगायत शुभकामना वा आशीर्वाद दिने लिने अवसरमा यस् ता भाव जागृतिको साइत जुर्छ । यसरी भाव जागृत ह“ुदा नागरिकमा अदम्य साहस र आत्मविश्वास पै दा हुन्छ । त्यही भावको ऊर्जाले े असंभवलाई संभव बनाउन सकिन्छ । नया“ वर्ष २०७५ ले पनि सबै मा अभ्यन्तरको भाव जागृत गराउन सको स् र त्यसले समृद्ध ने पालको सपना साकार पार्न प्रे रित गरो स् भन्ने विचार यहा“ प्रकट गर्न चाहन्छु ।
हरे क नागरिक वा राष्ट्रले आफू सफल हुने सपना दे खे को हुन्छ । सफल हुन सफलताको श्रृंखलालाई बुझ्नुपनेर् र पछ्याउनुपनेर् हुन्छ । सो क्रममा सर्वप्रथम व्यक्तिमा उत्प्रे रणाको जागृति अथवा भाव प्रकट हुनुपर्दछ । जुन स् वयंको महसुसीकरण र अरुको अभिमुखीकरणबाट संभव हुन्छ । व्यक्तिमा उत्प्रे रणा वा इच्छा वा रहर जागृत भएपछि व्यक्तिमा स् वतः आकांक्षा पै दा हुन्छ । उक्त आकांक्षा पूरा गर्न अब व्यक्तिले कडा मे हनत (परस् पीरे शन) गर्नुपर्दछ । कडा मे हनत गरे मा लक्षित आकांक्षा हासिल हुन्छ र जीवनमा गुणात्मक सुधार हुन थाल्छ । तर यही कडा मे हनत (परस् पीरे शन) को बिन्दुमा ने पाली समाज अड्किएको छ । मे हनतको साटो राशीफल हे रे र आकांक्षा हासिल गनेर् चे ष्टा गरिरहे को दे खिन्छ । यो अवस् थामा निराशा (डे स् िपरे शन) बढ्ने खतरा हुन्छ । यही आलस् ययुक्त वा निराशाको अवस् थालाई परिवर्तन गरे र जा“गरिलो समाज बनाउन अब सबै को ध्यान जानुपर्दछ । ने पालीले परदे शमा गरे को मे हनत प्रशंसनीय छ । स् वदे शमा मे हनत गनेर् बानीलाई स् थापित गर्न सके मा दे श विकासको अभियानले तीब्रता पाउने कुरामा कुनै सन्दे ह छै न ।
यतिखे र ने पाली समाजमा तीब्र विकासको प्रवल आकांक्षा व्याप्त छ । राजनीतिक अधिकारलाई ने पालको संविधानले संबो धन गरे बाट अब सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजे ण्डा प्रखररुपमा सामुन्ने मा आएको छ । हुन त विकासका लागि सरकारी, निजी र नागरिकस् तरबाट निरन्तर प्रयत्न भ इरहे का छन् । वार्षिक बजे टको आकार खरबको डबल बिन्दुमा उक्ले को छ । सघाउने दाताहरु पनि उल्ले ख्य संख्यामा रहे का छन् । पछिल्ला दशकमा गै रसरकारी क्षे त्रले पनि विकासमा ठूलो धनराशी लगानी गरिरहे को छ । सडक सञ्जाल दे शभर विस् तार भइरहे का छन् । करिव ७५ हजार किलो मिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ । दूरसञ्चार सुविधा दे शभर उपलव्ध छ । विद्युत से वा विस् तार भइरहे को छ । शिक्षा तथा स् वास् थ्य क्षे त्रमा सर्वसाधारणको पहु“च सहज हु“दै गएको छ । खाने पानी तथा सरसफाइको क्षे त्रमा पछिल्ला वर्षमा उल्ले ख्य प्रगति भएको छ । खुला दिशामुक्त क्षे त्र घो षणा गनेर् क्रम जारी छ । सिंचाई सुवधा बढे को छ । कृषितर्पm अन्नबाली, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढे को छ । बे मौ समी तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन बढिरहे को छ । माछा, मह, मसलाबालीप्रति कृषकको रो जाइ बढे को छ । पशुपालन र पो ल्ट्री व्यवसाय बढे को छ । उद्यो ग र पर्यटन फष्टाइरहे का छन् । प्रविधिको प्रयो गले उत्पादन र बजार सम्वन्ध सहज भएको छ । सामाजिक सशक्तिकरण र समावे शीकरण ह्वात्तै बढे को छ । नागरिकको जीवनस् तर बदलिदै गरे को दे ख्न सकिन्छ । तथापि विकासको प्रतिफलमा आम नागरिकको सन्तुष्टि प्रकट भएको पाइ“दै न । सरकारले से वाग्राहीप्रति गनेर् से वाप्रवाह वा सहजीकरण समय र लागतका दृष्टिले महङ्गो छ । विकासको मात्राले ल्याउनुपनेर् गुणात्मक परिवर्तन महसुस हुन सके को छै न ।
प्रश्न उठ्न सक्छ किन यस् तो असन्तुष्टि प्रकट भएको हो ला ? कारण अने क हुन सक्छन् । ती मध्ये एउटा कारण हो विकासको वितरणमा विभे द । अकोर् कारणमा आफूले सिन्को नभा“च्ने । अरुलाई गरे न भन्ने  । ते स्रो कारण अरुलाई शंका गनेर्  । यी र यस् तै ै कारणहरुले े निष्कर्षमा कसै लाई पनि विश्वास नगनेर् संस् कारको विकास भएको छ । फलस् वरुप सरकारप्रति पनि अविश्वास, समूह वा समुदायप्रति पनि अविश्वास, दाता वा निर्माताप्रति पनि अविश्वास । नागरिकको पदमा रहे काप्रति शंका, पदमा रहे काको नागरिकप्रति पनि शंका । जताततै आशंका र अविश्वासको कुइरीमण्डल । यसरी शंकै शंकाले गा“जे को ने पाली समाजले समग्र विकास व्यवस् थापनलाई पनि शंकाको भुमरीमा धके लिदिएको छ । त्यसै ले प्राप्त उपलव्धिसमे त ओ झे लमा परे का छन् । यस् तो ठीक बे ठीक छुट्टिन नसके को े अवस् थाले विकासमा एें जे रु लागे को प्रतित हुन्छ ।
विकासमा विकृति बढे को चित्र महाले खा परी क्षकको प्रतिवे दन, अख्तियार दुरुपयो ग अनुसन्धान आयो गले रङ्गे हात पक्राउ गरे का खवर र सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर संप्रे षण भइरहे का विकास सम्बद्ध भ्रष्टाचारका खबरले पुष्टि गरिरहे का छन् । दिनह“ुजसो आइरहने यस् ता संप्रे षणले े विकास नराम्ररी थला परे को महसुस हुन्छ । प्रकृतिले जतिसुकै स्रो त वा उपहार दिए पनि, दे शको अवस् िथति जतिसुकै अनकूल भए पनि र जनसंख्यामा युवाको बाहुल्यता भए पनि सरकारले इमानदार र जिम्मे वार भएर संरक्षण र सदुपयो ग नगर्दासम्म मुलुक फे रिन सक्दै न । राष्ट्र बनाउने महाअभियानमा नागरिक सरिक नहु“दासम्म विकासले दिगो प्रतिफल दिन सक्दै न । सम्हाल्ने सरकारले इमानदारिता प्रमाणित हुने शासकीय चरित्र नदे खाउ“दासम्म, सघाउने कर्मचारीले निष्कपट कार्य सम्पादन नगर्दासम्म जनताले सह्राउने अवस् था आउ“दै न । त्यसै ले प्रश्न उठ्नसक्छ के यतिखे र शासन सम्हाल्ने ने ता र सघाउने कर्मचारी सबै सार्वजनिक जिम्मे वारी र जवाफदे हिताबाट पन्छिएर व्यक्तिगत लाभ वा स् वार्थ पूर्तिमा लागे का हुन् त ? सबै लाई जनरलाइज गरे र यो आरो प लगाउन मिल्दै न । इमान्दार ने ता र कर्मचारीको उपस् िथति छ । तर मूल्य र मान्यताको कसीबाट मूल्यांकन गर्दा अहिले ने पाली समाज पहिला पै सा अनि इज्जतको मनो विज्ञानबाट निदेर् शित भएको स् पष्ट दे ख्न सकिन्छ । जसरी पनि पै सा कमाउने ध्याउन्नबाट बने को मानसिकताले आचरणलाई स् खलित बनाउ“दै लगे को छ । फलस् वरुप से वा गरे र कमाउने साटो जसरी पनि कमाउने प्रवृति हावी भएको छ । पै साले इज्जतलाई पछि पार्दा भ्रष्टाचारको जो खिम बढ्दै गएको छ ।
जिज्ञासा पै दा हुन्छ सही बाटो कुन हो ? उत्तर सहज छ सत्यको बाटो  । फे रि प्रश्न उठ्छ सत्यको बाटो कसरी पग्याउने ? उत्तर सरल छ छलकपट, लो भ, स् वार्थ र अहंकारबाट जो गिएर दया, माया, इमान र विवे कमा आधारित आदत र संस् कारको विकास गनेर् र त्यसै को साधना र अनुसरणमा निष्ठापूर्वक लाग्ने  । अकोर् प्रश्न उठ्ला कि अहिले को प्रतिस् पर्धा र प्रविधिले बनाएको खर्चिलो जीवनमा पै सालाई पहिलो प्राथमिकता नदिदा के समुन्नत जीवन संभव हो ला ? प्रतिउत्तर छ संभव छ । से वा गरे र कमाउनु आदर्श हो  । यो तरीकाको कमाइले इज्जत र धन दुबै दिन्छ र जीवन सम्पन्न र सुखी हुन्छ । कमाइको अकोर् विकल्प भने को ठगे र कमाउने हो  । जसले धन त प्राप्त हुन्छ तर इज्जत हु“दै न । त्यसै ले त महात्मा गान्धीले कामबिनाको धनलाई महा पाप भन्नु भएको छ । के धन सबै थो क हो ? पक्कै पनि धनमात्र सबै थो क हो इन । धन चाहिन्छ तर धन भन्दा माथि इज्जत र प्रतिष्ठा छन् । सारमा इज्जतलाई अघि लगाएर धन जति कमाए पनि हुन्छ । यही सत्य कुराको महसुस गर्न र गराउन नसक्दा अहिले को समाज असत्य वा मिथ्याको मार्गमा फस् छ कि भन्ने खतरा बढे को छ ।
अब सच्याउने वा सुधार गनेर् कसरी ? व्यक्तिले रहर, सीप र मे हनतलाई आफ्नो प“ूजीको रुपमा अन्तरनिहित गरे र निष्ठा, नै तिकता, इमान र विवे ककासाथ जिम्मे वारी बहनमा अथवा कर्तव्य निर्वाहमा लाग्ने हो भने समाज रुपान्तरणले फड्को मार्न बे र लाग्दै न । यस कुराको साक्षी सिङ्गापुर दे श छ । उक्त दे शले आफ्ना नागरिकलार्ई उचित शिक्षा, उन्नत प्रविधि र अनुशासित आचरणका माध्यमबाट मानवपू“जीको रुपमा विकास गरे को छ र सो ही मानवपू“जीको कुशल परिचालनबाट उक्त दे श एशियामा उत्कृष्ट जीवनशै ली भएको विकसित राष्ट्रको दर्जामा उक्लन सफल भएको छ । त्यसै ले व्यक्तिमा भएको रहर, सीप र मे हनतीपनलाई दया, माया, इमान, विवे क, निष्ठा र नै तिकताले संपो षण गरे र नागरिक कर्तव्य वा पदीय जिम्मे वारी बहनमा लाग्न सबै मा असल चे तना जागृत हुन जरुरी छ ।
मूल्य मान्यता र नै तिकताबाट विचलित व्यक्तिका आदत र सामाजिक संस् कारले े समग्र विकास प्रक्रिया नै नकारात्मकरुपमा प्रभावित भएको े हालको अवस् थामा समृद्ध ने पालको महासंकल्प साकार पार्न मूल्य मान्यता र नै तिकतामा आधारित नागरिक तयार पादैर् समाजमा असल संस् कार स् थापित गर्न शीर्ष तहदे खि अठो ट, आ“ट र दृढता आवश्यक दे खिएको छ । यसै बाट विकास व्यवस् थापनलाई समे त विश्वसनीय बनाउन सकिने छ । विकासको वितरणमा न्याय, सबले मे हनत गनेर् आदत र सबै प्रति विश्वास गनेर् वातावरण बन्नु नै विकासको सत्य युग आरम्भ हुनु हो  । यही ध्ये यबाट यस ले खमा विकासको सत्य युगको आकांक्षा प्रकट गरिएको हो  । विकासको सत्य युग आरम्भका लागि अब ताजा संकल्प चाहिएको छ । सबै ने पालीले सत्य निष्ठाको वाचा कसम खाएर इमान र नै तिकतालाई शीरमा सिउरे र समृद्ध ने पाल बनाउने अभियानमा जुट्न सबै मा नव वर्षले रहर जगाओ स् र विकासको सत्य युग ल्याओ स् भन्ने शुभकामनाका साथ यो ले ख यहीं बिसाउ“छु ।
Previous: विद्यार्थी भर्नाको अवस्था र अबको प्रतिबद्धता
Next: आर्थिक अराजकता रोक